​विरोध गर्ने आफ्नै शैली ! गर्मी बढेको भन्दै केटाहरुले स्कर्ट लगाएपछि...
९ अषाढ २०७४
बेलायतको डेभोनमा प्रशासनले करित ३० युवालाई सर्ट लगाएर विद्यालय आउन रोक लगाएपछि उनीहरुले स्कर्ट लगाएर विरोध जनाएका छन् । एक्सेटरको आइएससीए एकेडेमीका छात्रहरुले बढ्दो गर्मीका कारण विद्यालय पोशाक परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर विद्यालयले उनीहरुको आग्रह अस्वीकार गरिदियो । विरोध प्रदर्शनमा भाग लिइरहेका एक छात्रले भने–हामीलाई सर्ट लगाउने अनुमति दिइएन । हामी दिनभर फूल पाइन्ट लगाएर बस्न सक्दैनौ । गमी लाग्छ । डेभोन…विस्तृत समाचार »
एउटा विद्यालयः जहाँ शिक्षक/शिक्षिकाले विद्यार्थीसँग पाउ छोएर आशिर्वाद लिन्छन्
हिन्दू धर्ममा मान्यजनको पाउ छुनुलाई सम्मान गरेको प्रतिकका लिने गरिन्छ । पाउ ढोगेपछि मान्यजनले आशिर्वाद दिने चलन छ। प्राचीनकालदेखि आफ्नो गुरुलाई भगवानभन्दा माथिल्लो दर्जा दिने गरिन्छ । त्यसैले गुरुको पनि पाउ छोएर आशिर्वाद लिने परम्परा छ । उनमा गुरुको मात्र होइन, भगवानको पनि असिम कृपा रहने विश्वास गरिन्छ । तर, भारतको मुम्बईको एउटा विद्यालयमा भने त्यसको ठिक विपरीत हुने गरेको छ। यो विद्यालयमा उल्टो शिक्षकले…विस्तृत समाचार »
​हजार फेसबुक लाइकका लागि आफ्नै छोरा झ्यालबाट फ्याँक्न लागेपछि....
७ अषाढ २०७४
अल्जेरियामा एउटा विचित्रको घटना सार्वजनिक भएको छ। जसमा अदालतले एक जना पितालाई आफ्नो छोरालाई झ्यालमा झुन्ड्याएको आरोपमा दुई वर्ष जेल सजायँ सुनाएको छ। यी पिताले मल्टीस्टोरी भवनको आफ्नो फ्ल्याटको झ्यालबाट बालकलाई झन्ड्याएर तस्वीर खिचेका थिए । यो तस्वीर फेसबुक लाइक पाउनका लागि लिइएको थियो । उनले तस्वीरको क्याप्सनमा लेखेका थिए–१००० लाइक्स वा म यसलाई तल खसालिदिनेछु । उनको यो तस्वीर देखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बाल…विस्तृत समाचार »
‘गुडलक’का लागि गोहीको लिंगको व्यापार !
६ असार, काठमाडौं । बेलायत र भारतको एक संयुक्त सुरक्षा जाँच दलले भनेको छ कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको पर्दाफास भएको छ जो गोहीको लिंग बेच्न सक्रिय थियो । उक्त गिरोहले तान्त्रिक शक्ति हुन्छ भन्दै बुटीको रुपमा गोहीको लिंग बेच्ने गरेको हो । उनीहरुले रुखको जराको रुपमा गोहीको लिंग बेच्ने गरेको बताइएको छ जसले जीवनमा ‘गुडलक’ अर्थात् खुसी ल्याउनेछ भन्ने विज्ञापन गर्दै । बरामद गरिएका जोडी…विस्तृत समाचार »
विवाहका लागि भर्जिन हुनैपर्ने बाध्यता, यौनसम्बन्ध पछिपनि भर्जिन देखिन महिलाको यस्तो काइदा
ट्युनिसियामा जब कुनै युवतीको विवाह हुन्छ, तब उनी भर्जिन हुनुपर्ने आशा गरिन्छ । यही कारण त्यहाँ भर्निनिटी पुनः प्राप्तिका लागि हाइमन लगाउने कारोबार खुबै बढेको छ । यास्मिन (परिवर्तित नाम) निकै त्रसित छिन् । उनी आफ्नो नङलाई दाँतले काटिरहेकी छिन्, निरन्तर मोबाइल हेरिरहेकी छन् । उनले भनिन्–म यसलाई धोकाजस्तै मान्छु, त्यसैले म निकै दुःखी छु । हामी ट्युनिसियाको एउटा निजी क्लिनिकको चौथो तलामा छौ…विस्तृत समाचार »
​कसरी सुखी राख्छन् दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति मुसाले आफ्ना चार श्रीमतीलाई ?
३ अषाढ २०७४
नेपालमा बहुविवाह गर्दा जेल पर्ने खतरा छ, तर दक्षिण अफ्रिकामा एकभन्दा बढी विवाह गर्नु कानुनी हो । नेपालमा पहिलो श्रीमती रहेकै अवस्थामा अर्को विवाह गरे लामै जेलको बास हुन्छ । तर, दक्षिण अफ्रिकाका पुरुषहरु कयौ विवाह गर्न सक्छन्। दक्षिण अफ्रिकाका ४३ वर्षीय राष्ट पति ज्याकब जुमा मुसाका चार श्रीमती छन् । चार श्रीमतीका साथ उनी दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुलु नटाल प्रान्तमा बसोबास गर्छन् । उनका चार…विस्तृत समाचार »
​कस्तो नाइटो हुने महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
नाभीको आकार–प्रकारले महिलाको व्यक्तित्व पहिचान गर्न सकिने ज्योतिष तथा मनोविज्ञहरुको मत छ । यदि कुनै महिलाको नाभी लामो ठाडो आकारको छ भने उनमा यौन इच्छा तीब्र हुन्छ । यस्ता महिला बोल्ड हुन्छन् । गोलाकार नाइटो हुने महिलाहरु गम्भीर प्रकृतिका, दयालु, इमान्दार र स्वस्थ हुन्छन् । नाइटो पेटको ठीक बीचमा नभएर केही दायाँबायाँ हुने महिलाहरु खेलकुदको क्षेत्रमा निकै प्रगति गर्ने खालका हुन्छन् । उनीहरु उनी मुडी…विस्तृत समाचार »
​महिलासम्बन्धी थाहा पाउनैपर्ने केही रोचक तथ्य
महिला भन्ने बित्तिकै सुन्दरता, सहनशीलता, धैर्यता र कामुकताजस्ता विशेषण लाग्ने गर्दछन् । तर, महिलाको महिमा यतिमा मात्र सीमित छैन । यद्यपि महिला वा पुरुष जो कोहीका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । तर, केही त्यस्ता पक्ष पनि छन् जसका बारेमा सबै जानकार हुँदैनन् । सकारात्मक–नकारात्मक जे भए पनि ती पक्षहरु आफैमा रोचक एवं स्मरणीय हुन्छन् । आम महिलाको आनिबानीका विषयमा विभिन्न अध्ययन हुने गरेका…विस्तृत समाचार »
सम्बन्ध विच्छेदका कानुन पनि कस्ता कस्ता
पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स आफैमा अप्रिय घटना हो । डिभोर्सको विषयमा दुनियाँका विभिन्न देशमा विभिन्न खाले चलन तथा नियम कानुन छन् । कतिपय देशहरु डिभोर्सका मामिलामा बढि महिलामैत्री छन् भने कतिपय देशहरुले पुरुषलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छन् । बेलायती अनलाइन मेट्रो डट को डट युकेका अनुसार डिभोर्स सम्बन्धी विश्वका केही अनौठा नियम कानुन यस्ता छन् । साउदी अरबमा यदि कुनै महिलाले आफ्नो श्रीमान्लाई हरेक…विस्तृत समाचार »
यसरी चिन्नुहोस् महिला विवादित हुन् की अविबाहित
कुनै युवतीलाई दखेर आकर्षित हुने वित्तिकै एउटा प्रश्न उत्पन्न हुने गर्दछ कि उनी विवाहित हुन् वा होइनन् । तपाईको यो प्रश्नलाई हामीले केही सहज बनाइदिएका छौ । केही इशारा छन् जसलाई ख्याल गर्ने हो भने तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ कि तपाईलाई मन परेकी युवती विवाहित छिन् वा छैनन्। त्यसका लागि तलका बुँदा यसो हेर्ने कि । १. यदि कुनै सामाजिक भेटघाट वा पार्टीमा उनी पटक…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 21 22 23 24 25 Older